Maitiro Ekuziva Kana Mumwe Munhu Akakudzivirira Iwe PaWhatsapp 2021
Unoziva Sei Iwe Kana Mumwe Munhu Akakudzivirira Iwe PaWhatsapp
Kana iwe uri kutumira mumwe munhu WhatsApp mameseji, asi iwe usiri kuwana chero mhinduro, iwe unogona kunge uchishamisika kana iwe wakavharirwa. Zvakanaka, WhatsApp haibudi pachena uye uzvitaure, asi pane nzira dzinoverengeka dzekuzviona.
Ona Mashoko Ekubatana muChat
Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuita kuvhura hurukuro muWhatsApp kunyorera ye iPhone kana Android wobva watarisa kune ekutaurirana kumusoro. Kana iwe usingakwanise kuona yavo yepikicha pikicha uye yavo yekupedzisira kuona, zvinokwanisika kuti ivo vakakuvharira iwe.Kushayikwa kweavatar uye yekupedzisira kuona meseji hakusi vimbiso yekuti ivo vakakuvharira iwe. Wako waunobata angangodaro akaremadza yavo Yekupedzisira Kuwona chiitiko.
Edza Kutumira Meseji kana Kufona
Paunotumira meseji neimwe nzira ndiani akuvharira, iyo risiti yekuendesa ichangoratidza chete cheki yekutarisa. Kana iwe ukavatumira mameseji vasati vakuvhara, iwe waizoona mamaki maviri ekutarisa pachinzvimbo. Unogona zvakare kuyedza kuvafonera. Kana kufona kwako kukasapfuura, zvinoreva kuti unogona kunge wakavharirwa. WhatsApp ichanyatso kuisa kufona kwauri, uye iwe uchainzwa ichirira, asi hapana anozotora kune rimwe divi.
Edza Kuvawedzera kune Boka
Iyi nhanho inokupa iwe chiratidzo chechokwadi. Edza kuumba boka idzva muWhatsApp uye sanganisira wekubatana muboka. Kana WhatsApp ikakuudza kuti iyo app haina kukwanisa kuwedzera munhu wacho kuboka, zvinoreva kuti vakakuvharira.